Vaovao - Inona no atao hoe mpanara-maso ny tahan'ny fo?
Ny antsoina hoe maso tahan'ny fo dia famantaranandro izay afaka mirakitra marina ny fitepon'ny fontsika amin'ny fotoana tena izy mandritra ny fanatanjahan-tena. Ny anjara asan'ny maso tahan'ny maso amin'ny fanatanjahan-tena misy tanjona dia miharihary.
Misy fitsipika roa iraisana amin'ny fandrefesana ny latabatra ny tahan'ny fo: ny iray dia ny fomba fandrefesana ny fo ankehitriny, ary ny iray ny fomba fandrefesana photoelectric.
Ny vatan'olombelona antsika dia hiteraka aretim-po isaky ny mitempo ny fo, ny taratra tratra tahan'ny tsy misy tariby dia fitaovana toy izany izay mahatsapa ny fandehanan'ny fo. Ny sombin-tsoratry ny sensor dia miorina amin'ny lafiny roa anoloana ny tratra. Rehefa avy mitafy ny tratra ny mpampiasa dia manangona ny amplitude fluctuation ny aretim-po ataon'ny mpanao fanatanjahan-tena ny poleta, ary avy eo mandefa azy any amin'ny metatra tahan'ny fo amin'ny alàlan'ny teknolojia fampitana tsy misy tariby hanovana azy ho sanda BPM amin'ny tahan'ny fo ho an'ny fandinihana mora. Amin'izao fotoana izao, ity no fomba mahazatra sy somary marina amin'ny fandrefesana ny tahan'ny fo mandritra ny fanatanjahan-tena.
Ny fitsipika dia mitovy amin'ny an'ny electrocardiogram. Tombony iray hafa amin'ity fomba fandrefesana ny tahan'ny fo ity ny fandrefesana azy tsy tapaka mandritra ny fanatanjahan-tena.
Fomba fandrefesana ny photoelectric
Ny fandrefesana ny photoelectrique dia mampiasa fiovana amin'ny absorbance hemôglôbinin ao amin'ny lalan-drà handrefesana ny pulsa. Ny famantaranandro dia misy fantsom-pandrefesana fandefasana infrared ary tadivavarana mandray sy taratra. Ny tombony amin'ity fomba ity dia tsotra be ny fandrefesana ny tahan'ny fony tsy misy fehikibo. Na izany aza, satria ny famantarana dia tena malemy ary tena mora ny manelingelina ny any ivelany, ny angona fandrefesana dia tsy marina, ary amin'ny ankapobeny dia mila refesina amin'ny fanjakana milamina, noho izany dia tsy mety amin'ny fandrefesana ny tahan'ny fitempon'ny fo mandritra ny fanatanjahan-tena.
Ny Green Light Photogrammetry dia misy halavan'ny halavan'ny maitso izay mamoaka LED sy fakan-tsary fakan-tsary izay miorina ao ambadiky ny maso tahan'ny fo. Ny fotokevitra dia mifototra amin'ny fiovana amin'ny hakitroky ny lalan-dra ao amin'ny sandry mandritra ny famonoana, ka miteraka fiovana eo amin'ny fivezivezena maivana. Ny taratra LED manaparitaka hazavana dia mamoaka ny halavan'ny hazavana maitso, ary ny fakantsary fakan-tahaka dia mandray hazavana taratra amin'ny hoditry ny sandry ary mandrefy ny fiovana amin'ny hamafin'ny sahan-jiro ary hamadika izany ho tahan'ny fo. Ny teknolojia dia ampiasain'ny Mio Alpha, Fitbox HXM ary Adidas Smart Run tahan'ny mpanara-maso any Etazonia. Ny fandrefesana ny fo tahan-jiro photoelectric jiro dia nandao tanteraka ny fatran'ny tratran'ny tahan'ny fo, ary afaka mandrefy ny tahan'ny fo tsy tapaka, mikajiana ny tahan'ny fo eo ho eo, manoratra ny tahan'ny fo ambony indrindra, mametra ny elanelan'ny fanairana ny fo.
Andian-tsarimihetsika ho an'ny daholobe
Ny ampahany lehibe amin'ny andiam-panatanjahan-tena dia hatramin'ny maody fanazaran-tena 18. Ny fomba fanatanjahan-tena dia mifototra amin'ny toe-batana manokana izay manandrana mandeha ho azy ny tahan'ny tahan'ny fampihetseham-po manokana. Izy io dia miantoka fa ny fanazaran-tena rehetra ataonao dia mandaitra sy azo antoka.
Azonao atao mihitsy aza ny mampiasa endri-javatra roa tsy manam-paharoa amin'ny fivoaran'ny faritra tahan'ny fo mifototra amin'ny tanjona kendrenao. Ho fanampin'izany, ny Fitness Series dia miaraka amina tarika silipo ahazoana aina izay manome fampahalalana marina momba ny tahan'ny fo mandritra ny fotoana fiasanao. Andian-tsarimihetsika ho an'ny daholobe ho an'ny ankamaroan'ny olona tia fanatanjahan-tena, ara-toekarena, no safidinao voalohany.
Azo antoka fa mila finiavana sy herim-po vao ho mpihazakazaka tsara.
Raha te hanao tsara kokoa ianao dia mila mampiasa ny lohanao. Ny Running Heart Rate Monitor dia mamadika ny vaovao ho lasa hafainganam-pandeha, izay afaka manampy anao hahatratra fampisehoana tsara sy hialana amin'ny hatsembohana kely mandritra ny fampihetseham-batanao.
Izy io dia afaka manara-maso marina ny tahan'ny fo, ny halaviran'ny bisikileta, ny hafainganam-pandeha, ny fe-potoana, ny fivoahan'ny herinaratra ary ny sarintany.
Ahafahanao mamoaka angovo lehibe indrindra toa ny atleta matihanina.
Andiany fitantanana lanja
Natao manokana. Izy io dia hampifanaraka ny programa fanaraha-maso lanja ho anao, milaza aminao hoe ohatrinona ny lanja tokony ho laninao amin'ny fomba sy ny ora. Zava-dehibe, ny fanaraha-maso ny tahan'ny fo dia hitazona anao ho any amin'ny faritry bullseye, izay torolàlana ho fanatanjahan-tena.
Raha mbola mitafy azy eo amin'ny tananao ianao ary manaraka ny torohevitry ny programa isan'andro fotsiny dia azonao atao ny mahatratra ny lanjanao tsara. Hanentana sy hanampy anao hiasa hatrany izany. Mora ampiasaina ary manara-maso ny fandrosoanao isan'andro sy isan-kerinandro. Izy io dia afaka manampy anao hahatratra sy hihazona ny lanjanao mety, mamela anao hahatratra ny tena valim-panatanjahan-tena maharitra.